Imega ahụ ọ na-enyere gị aka ihi ụra nke ọma? - Mmega
Isi > Mmega > Mmega emeziwanye ura - otu esi edozi
Mmega emeziwanye ura - otu esi edozi
Imega ahụ ọ na-enyere gị aka ihi ụra nke ọma?
Na-emega ahụnakwa mmahie ụramaka otutu mmadu. Kpọmkwem, agafeghị oke-na-umemmega ahụ nwere ikeabawanyehie ụramma maka ndị okenye site na mbenatahie ụrammalite - ma ọ bụ oge ọ na-ewedaa n'ụra- ma belata oge ha na-ehi ụra na akwa ụra n'abalị.
Insomnia na-emetụta ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmadụ niile n'oge ụfọdụ na ndụ ha ma na-eme ka o sie ike ihi ụra ma ọ bụ ihi ụra. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ihe mgbaàmà dị nro, dị mkpụmkpụ, mana mgbe ọ siri ike ma dịrị ogologo oge a na-ewere ya dị ka nsogbu, onye ahụ na-enwe ike ọgwụgwụ. N'ụzọ dị mwute, ịgwọ ụra ehighị ụra nke ọma bụ ihe ịma aka.
Dịka ọmụmaatụ, ọgwụ ụra na-enwekarị mmetụta ndị dị ize ndụ ma nwee ike bụrụ omume, yabụ a na-atụkarị aro maka iji nwa oge mgbe ha nwesịrị nhọrọ ndị ọzọ. Ọgwụgwọ bụ ọgwụgwọ akparamagwa na-arụ ọrụ nke ọma mana ọ chọrọ nleba ahụike nke na-ewe oge na ego . Nke a bụ ebe ije na-abanye.
Mmega ahụ dị mma, enwere ike ịme ya ngwa ngwa na ọnụ ala, ọ chọghị enyemaka nke dọkịta nwere oke ọkachamara. Egosiputa mmega na otutu omumu iji meziwanye ura, ya mere mmega ahu bu isi okwu site na National Sleep Foundation iji meziwanye ura Banyere otutu uru doro anya nke mmega ahu, omumu ole na ole lebara anya na mmekorita di n'etiti ehighi ura. Ya mere, ọ ga-edo anya ma mmega ahụ na-eme ka ụra nke ndị na-ehi ụra nke ọma ka ọ bụ na ọ gaghị eme ya.
Iji zaa ajụjụ a, ndị na-eme nnyocha lere anya n’ọmụmụ ihe ole na ole lere anya n’ihe jikọrọ mmega ahụ́ na ihe mgbaàmà nke ehighị ụra nke ọma ma ọ bụ ehighị ụra nke ọma. Ha lere anya na ọnwụnwa ndị a na-ahụkarị na-eme ma ọ dịkarịa ala minit 30 ma ọ bụ mmega ahụ dị ka ịgba ígwè ma ọ bụ mmega ahụ dị ka yoga ma ọ bụ tai chi kwa oge ọ bụla ma ọ dịkarịa ala minit 120 nke nkeji oge kwa izu ruo ọtụtụ izu iji hụ ma ụra niile ga-aka ndị okenye na ehighị ụra nke ọma. Iji tụọ ogo ụra, ọmụmụ ihe ahụ jiri data nke onwe ya dịka ajụjụ na akwụkwọ edetu, ma ọ bụ data ebumnuche dịka actigraphy, nke na-emegharị ahụ mmadụ n'abalị, ma ọ bụ polysomnography, nke na-atụle ụbụrụ ụbụrụ, ụda obi, na iku ume n'abalị.
So ɛyɛ den ma wo sɛ wubegyina ano? Ka anyị bido n’ọmụmụ ihe gbasara ndị mmadụ nwere akara nwayọ nwayọ ma ọ bụ obere oge nke ehighị ụra nke ọma. Anọ n'ime ọmụmụ ihe ise na-eji data nkeonwe achọpụta na mmega ahụ mere ka ụra ka mma, ebe ọmụmụ nke ise egosighi ọdịiche dị n'etiti mmega ahụ na otu njikwa. Enweghị ọdịiche doro anya dị n'etiti usoro ikuku na ahụ-uche na ọmụmụ ihe ndị a.
N'otu aka ahụ, abụọ n'ime ọmụmụ ihe atọ ejiri data ebumnuche chọpụtara na mmega ahụ na-ehi ụra nke ọma. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọmụmụ ihe ahụ nke na-egosighi mmelite na-adabere na data ebumnuche gosipụtara mmụba dabere na data nkeonwe anakọtara na ọmụmụ ihe ahụ. Ugbu a, ka anyị gbanwee ma lee anya n'ọmụmụ ihe banyere ndị nwere nchoputa siri ike karị nke ehighị ụra nke ọma.
Anọ n'ime ọmụmụ ihe ise na-eji data ihe ọmụmụ achọtara mmega ahụ na-enyere aka, ọzọkwa enweghị ọdịiche doro anya n'etiti mmega ahụ nke ikuku ma ọ bụ nke uche. N'aka nke ọzọ, ọmụmụ ihe ise niile jiri data ebumnuche gosipụtara na mmega ahụ enweghị mmetụta na ehighị ụra. Ebee ka nke ahụ dị maka anyị? Ibido nyocha a dabere na obere ọmụmụ ole na ole pere mpe - yabụ ike ịkpa oke adịghị mma - nke pụtara na ọ nwere ike isi ike ịhụ nsonaazụ nke mmega ahụ na ehighị ụra mgbe mmetụta ndị ahụ dị obere - Insomnia na-adịru nwa oge mgbaàmà egosiputa uru site na mmega ahụ, ndị mmadụ na-ehighị ụra na-akọkwa ha, ọ bụ ezie na data ebumnuche maka ha anaghị egosipụta ya.
N'okwu a, mmega ahụ nwere ike ime ka ọnọdụ ma ọ bụ ike dịkwuo mma ka ọ ghara ịmetụta ụra nke ụra ahụ nke ọma, ma ọ bụ ikekwe uru dị obere na achọpụtaghị ya n'ihi ike adịghị ike nke ọmụmụ ihe. Iche iche, eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ kwuru na ọ dị ha mma karịa mgbaàmà nke ehighị ụra nke ọma na-eme ka mgbatị ahụ bụrụ akụkụ nke usoro ọgwụgwọ maka onye ọ bụla nwere ehighị ụra nke ọma. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ echiche maka ihe kpatara mmega ahụ ji enyere aka melite ehighị ụra nke ọma, a naghị aghọtacha usoro ahụ.
Na-arapara n’ajụjụ ma enwere ụdị mmega ahụ kachasị mma ma ọ bụ oge mmega ahụ nke a ga-eme iji melite mgbaàmà nke ehighị ụra nke ọma? A chọkwuru ọmụmụ ihe iji mee ụdị ndụmọdụ a.
Gịnị mere mmega ahụ ji enyere anyị aka ihi ụra nke ọma?
Mmeganwere ike mezie gị esịtidem elekere.
Ngbaghara nke rhythm nke circadiannwere ikemee ka ike gwụ ha n'abalị n'abalị karịa “ihe nkịtị.” Dabere n'oge nke ụbọchị hammega ahụ, ọnwere ike inyere akatọgharịa elekere ha naEnyemakahadaa n'ụrana mbụ.Mkpebi nke 11 2020
Olee mgbe m kwesịrị ịna-emega ahụ́ iji hie ụra?
N'ihi naọtụtụ ndị mmadụ, agafeghị oke-ikemmega ahụenweghị mmetụta na-ebibi ihe nahie ụraọ bụrụhaala na ọ kwụsịrị ma ọ dịkarịa ala minit 90 tupu ị lakpuo ụra12. Nke a na-enye ohere ogemakaendorphin etoju na isi ahụ okpomọkụ iji laghachi n'ọkwa dị mmahie ụra.June 24. 2021
Kọmputa ọ na - emezi ụra?
Cardio. Obi abụọ adịghị ya,mmega ahụ aerobicbudata mmahie ụra. Nke ahụ gụnyere ihe niile, site na ịgba ọsọ na igwe ịgba ọsọ ruo ịgbagharị na elliptical ruo naanị ije. Dị ka anyị kwuru na mbụ, ọrụ siri ike bara uru nke ukwuuhie ụra, ma agụla mmega ahụ́ gabiga ókè.
Mgba ọsọ ọ na-emezi ụra?
A ọmụmụ bipụtara na Journal of ClinicalSraMedicine achọpụtala na imega ahụ mgbe niile nwere ikemeliteogo gịhie ụranaEnyemakagịhie ụraN'abalị. Naanị ihe bụ na ọ na-ewe ihe dịka ọnwa 4 iji jiri ahụ gị na ogo ogo ọrụ.Mar 25 2019
Gini mere mgbatị ji enyere ụra ụra kacha mma?
Ikekwe ụzọ kacha pụta ìhèmmega na-enyere akagịhie ụraọ bụ na ọ na-agwụ gị ike.Imega ahụenwekwu gịhie ụraụgbọala (8), ma ọ bụ mkpa makahie ụra. Mgbe ị na-emega ahụ, ahụ gị chọrọ ịgbake, yanaụra bụ aezigbo ụzọ nke ahụ.Mar 24 2021
Kedu ka esi agbakọ ọnụego obi mgbake?
Wepụ nkeji 2obi obisite naobi obiị were ozugbo emega ahụ. Ngwa ngwa gịobi obina-agbake (ma ọ bụ na-akwụsịlata) ihe na-adabara gị na ahụike gịobi. Ọ bụrụ n ’ọdịiche dị n’etiti nọmba abụọ a bụ: Ihe na-erughi 22: Afọ ndụ gị bụ okenye karịa afọ kalenda gị.Sep 20 2016
Ọ dị njọ mgbatị ahụ na elekere iri nke abalị?
Otutu ndi mmadu kwesiri izere idi ikemgbatịna mbubreyo mgbede ma ọ bụ ozugbo tupu ị lakpuo ụra ma ọ bụrụ na ha chọrọ ihi ụra abalị kachasị mma, dị ka National Sleep Foundation nke American si kwuo. Nọvemba
Ọ dị mma ihi ụra na ntutu ntutu mmiri?
Na-agarahụ ụra na ntutu mmirinwere ikeọjọọmaka gị, ma ọ bụghị n'ụzọ nne nne gị siri dọọ gị aka ná ntị. Kwesịrị, ị kwesịrị ị na-agabedna akọrọ kpamkpamntutuiji belata ihe ize ndụ gị nke fungal na-efe efe nantutuimebi.Ihi ụra na ntutu mmirinwekwara ike ibute ọzọ tangles na a funky mane ka agbasaghị ụtụtụ.
Ọ dị mma ịrahụ ụra mgbe mgbatị ahụ gasịrị?
Ara ụraemega ahụnwere ike ịkwado mgbake ahụ. Mgbe ịhie ụra, gị pituitary gland wepụtara uto hormone. Mkpụrụ ahụ gị chọrọ hormone a iji rụzie ma wuo anụ ahụ. Nke a dị mkpa maka uto ahụ ike, ịrụ ọrụ egwuregwu, na ị nweta uru nke mmega ahụ.Ọnwa Isii 26. 2020bọchị 2020
Nwere ike iji aka gị hie ụra?
Nkeji 30 nkemmega ahụnwere ike inyere akagịmerie ụra nke ọma.Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ihi ụra, ihi ụra, ma ọ bụ na-eteta mgbe mgbe n'abalị,gịọ bụghị naanị gị. Dị ka Instlọ Ọrụ Ahụ Ike Mba si kwuo, ihe karịrị nde ndị America 70 na-enwe ehighị ụra oge ụfọdụ na ndụ ha.
gu ike gel nyochaa
Ọ bụ eziokwu na mmega ahụ na-eme ka ụra dịkwuo mma?
Mmega ahụ na-enyere aka Ihi ụra. Ndị ọrụ nyocha kwuru na ndị so na-emega ahụ gosipụtara na ogo ụra ha kaara mma, na-ewelite nchoputa ha site na ndị ogbenye gaa ezigbo ụra.
Kwesịrị ịdị na-emega ahụ n'abalị iji hie ezigbo ụra?
Ma, maka ụfọdụ ndị, imega ahụ oge gafere ụbọchị nwere ike igbochi etu ha ga-esi zuru ike n'abalị. Dabere na ọmụmụ ndị dịnụ, 'Anyị nwere ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ na mmega ahụ na-enyere gị aka ịrahụ ụra ọsọ ọsọ karị ma meziwanye ụra ụra,' ka Charlene Gamaldo, MD kwuru.
Kedu ihe jikọrọ ụra na ịrụ ọrụ?
Mmekọrịta dị n'etiti mmega ahụ na ụra bụ nke mmegiderịta (2). Ọ dị mfe ihi ụra mgbe ị na-emega ahụ, ọ dịkwa mfe ịrụ ọrụ mgbe ezigbo ụra abalị. Ọ dị mfe ihi ụra mgbe ị na-emega ahụ, ọ dịkwa mfe ịrụ ọrụ mgbe ezigbo ụra abalị.